Isebenza njani iTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Isebenza njani iTelegram?
Epreli 26, 2021 0 IiCententarios 302
Ukuba kukho usetyenziso olufanele ukulanda kwizixhobo zethu ezichanekileyo ngeTelegraph, iqonga lomyalezo elithandwayo kwangoko elibangela uvakalelo olukhulu phakathi kwabasebenzisi benethiwekhi. Isicelo sinikezela ngemisebenzi enomdla kwaye namhlanje siza kuchaza ezinye zazo.
Uninzi lwazi iTelegram njengesicelo sokuthumela kunye nokufumana imiyalezo kwangoko, nangona kunjalo eli qonga lihamba ngakumbi. Abasebenzisi banokukhetha ukufikelela eminye imisebenzi enomtsalane ngakumbi, umzekelo, ukutshintshiselana ngeefayile zemultimedia kunye nokugcina umxholo ongasikelwanga mda.
Ngaphambi kokwazi eminye yemisebenzi ephambili enikezelwa sisicelo seTelegram, kubalulekile yazi ukuba eli qonga lingantoni kwaye kwenzeka njani ukuba ibe yenye yezintandokazi zoluntu.
I-Telegram ithathwa njengenye yezona zicelo ezona zilungileyo zokuthumela imiyalezo kwiimarike. Ngokusisiseko liqonga elenzelwe ukuthumela nokufumana umxholo, nokuba yimiyalezo, iifoto, iividiyo okanye naluphi na uhlobo lweefayile.
Esi sicelo sifike ukuphucula indlela esinxibelelana ngayo nokwenza ubomi bube lula kakhulu. Ngoku akukho mfuneko yokuba uye endlwini yomntu ukuze udlulise umyalezo. Ungayenza ukusuka kwintuthuzelo yekhaya lakho ngokusebenzisa olu hlobo lweqonga ledijithali.
Imisebenzi ephambili esiyifumana kwiTelegram
Awazi ukuba isebenza njani iTelegram? Hlaziya, kuqhelekile ukuba awuyazi yonke imisebenzi edityaniswa nokusetyenziswa kwemiyalezo engaqhelekanga, kodwa ngenxa yokuba silapha, ukukufundisa indlela yokuyisebenzisa ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Kukho imisebenzi esisiseko engadingi nkcazo iphambili, umzekelo ukuthumela nokufumana imiyalezo. Ukuba ufuna ukuthumela ulwazi komnye wabafowunelwa bakho kuya kufuneka:
Cinezela malunga ne icon yepensile
Khetha umfowunelwa ofuna ukumbhalela
Kwaye ukulungele. Bhala umyalezo uze ucinezele ukuthumela
Yabelana ngeefoto kunye neevidiyo
Unokusebenzisa iTelegram ukwabelana ngeefayile njengezithombe neevidiyo. Ukwenza oko kulula kakhulu:
Vula Yocingo kwiselula
Cofa malunga ne icon yepensile
Khetha umfowunelwa ofuna ukwabelana naye ngefayile
Cofa ku "Ukuncamathisela"
Ngoku kufuneka nje khetha ifayile kwaye uyithumele.
Ngaba uyazi ukuba iTelegram ikunika ithuba lokuba neengxoxo ezifihlakeleyo? Lo ngowona msebenzi ubangela umdla osinikwayo sisicelo. Incoko eyimfihlo isivumela ukuba sikhuseleke ngakumbi kwaye sikhusele imfihlo yethu.
Enye yezinto ezintsha zesicelo zichanekile ngokuchanekileyo izingxoxo zabo ngasese, apho imiyalezo izenzakalise ngokuzenzekelayo emva kwexesha elithile.
Kukho abo bakholelwa ukuba iTelegram isebenza kuphela ngenombolo yefowuni, nangona kunjalo akukho sidingo sokutsho inombolo yethu ukuze basongeze njengabahlobo.
Unokhetho lokwenza igama lomsebenzisi okanye izibizo ukuze basongeze ngokulula ngaphandle kokunika inombolo yethu yefowuni.
Omnye wemisebenzi emikhulu efakwe yiTelegram yinto enokwenzeka ube nakho ukusebenzisa usetyenziso njengomthombo wokugcina. Yonke into oyifumanayo ngencoko yakho ungayigcina efini kwaye uyifikelele nanini na ufuna.
1 Yintoni iTelegram?
2 Imisebenzi ephambili esiyifumana kwiTelegram
3 Yabelana ngeefoto kunye neevidiyo
4 Iingxoxo eziyimfihlo
5 Igama lomsebenzisi
6 Ukugcina okungenamkhawulo
Ungayicima njani iakhawunti yeTelegram?
Ukucima iiakhawunti ze-Facebook